တရုတ်နိုင်ငံ ထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂၀၂၁ အထိ ရောင်း ချရန် အသင့် မဖြစ်နိုင်သေးဟုဆို – Let Pan Daily
တရုတ်နိုင်ငံ ထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂၀၂၁ အထိ ရောင်း ချရန် အသင့် မဖြစ်နိုင်သေးဟုဆို
တရုတ်အစိုးရသတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ကာကွယ်ဆေးထုတ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကို အနည်းဆုံး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရောင်းချရန် အသင့်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ကုမ္ပဏီ အကြီးအကဲတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
A worker is seen inside the P4 laboratory in Wuhan, capital of China’s Hubei province, on February 23, 2017. – The P4 epidemiological laboratory was built in co-operation with French bio-industrial firm Institut Merieux and the Chinese Academy of Sciences. (Photo by Johannes EISELE / AFP)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း (World Health Organization – WHO) က ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ COVID-19 ကို ကာကွယ်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကာကွယ်ဆေး ၁၀ ခုကျော်ကို လူတွေမှာ စမ်းသပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးတွေ အနက် နောက်ဆုံးအဆင့် ၃ စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပါဘူး။
ထိုအဆင့်ကို စမ်းသပ်ရန်ပြီး ကာကွယ်ဆေး ရဲ့ ထိရောက်မှု ကို သိရှိဆုံးဖြတ်ရန် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပါဝင်စမ်းသပ်ခံသူတွေမှာ စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်က COVID-19 စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မေလအတွင်း နေ့စဉ် ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုအသစ် ၁၀ ဦးထက်လျော့နည်း သွားခဲ့ရာ ကာကွယ်ဆေးရဲ့ နောက်ပိုင်းအဆင့် စမ်းသပ်မှုအတွက် မသင့်လျော်တဲ့ အခြေအနေလို့ ဆိုပါတယ်။
“ဈေးကွက်ကို ကာကွယ်ဆေး ရောက်ရှိရေး ကူညီဖို့ အတွက် နောက်ထပ် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ အဆင့် ၃ ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှု နေရာတွေ စတင်ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ China National Biotec Group (CNBG) ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ Zhang Yutao က တရုတ်အစိုးရ သတင်းဌာန China News Service ကို ပြောပါတယ်။
“လက်ရှိ အစီအစဉ်တွေ အရ ကာကွယ်ဆေးက အနည်းဆုံး နောက်နှစ်အထိ ဈေးကွက်ကိုရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ ကြာသတေး (ဇွန် ၁၈ ရက်) နှောင်းပိုင်းက ထုတ်လွှင့်ဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ၎င်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော ရက်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဘေဂျင်းမြို့တော်မှာ နောက်ထပ် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ အသစ် ၁၈၀ ကျော် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ ထိုလူနာအသစ် အရေအတွက်နဲ့ လူဦးရေကို နှိုင်းယှဉ်မှုအရ ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်နေရာအဖြစ် ဖော်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း Zhang Yutao က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Chinese Lab with Checkered Safety Record Draws Scrutiny over COVID …
CNBG ကုမ္ပဏီဟာ တရုတ် အစိုးရပိုင် China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရန် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးအနက် တစ်မျိုးကို လူတွေမှာ စမ်းသပ်ခဲ့ရာ အစောပိုင်းအဆင့် ရလဒ် ကောင်းများ တွေ့ရှိထား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
China steps up inactivated COVID-19 vaccine development – Xinhua …
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း တရုတ် အစိုးရမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့မှုအရ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နှစ်မျိုးကို နိုင်ငံရပ်ခြား သို့ ခရီးသွားလာတဲ့ အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကို ထိုးနှံပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၈.၆ သန်းကျော်၊ သေဆုံးသူ ၄၅၀,၀၀၀ ကျော်နဲ့ ပြန်လည်သက်သာသူ ၄.၅ သန်းကျော်ရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။